Lago Coatepeque, Quinta El Emperador - I-Airbnb
Lago Coatepeque, Quinta El Emperador
Potrerillos de la Laguna, Santa Ana, El Salvador
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguOscar
Incluido hay cobijas, ollas/sartenes, utensilios, microwave, refrigerador, y parilla (carbon no esta incluido). Ishampu eyimfuneko/ijabon. Ukufumana i-8 x $ 105 yonke into eyongezelelweyo es $ 10x umntu.
Le ndlu yechibi inedokhi kunye nokufikelela ngokuthe ngqo echibini. Kufuphi ungafumana iindawo zokutyela ezininzi, unokuqesha ijet skis kufutshane. Ukuba kuyimfuneko, ndiza kukunika inombolo. Le yindlu enemigangatho emi-2 enamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela eli-2. Ibali lesibini linebalcony enombono omkhulu walo lonke ichibi. Ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye namagumbi okulala axhotyiswe ngezinto ezibalulekileyo. Ngaphandle ungafumana ichibi elincinci, i-gazebo kunye ne-dock.
Kuqukwe amashiti ebhedi, iimbiza/iipani, izitya, imicrowave, ifriji, igrill yebbq (amalahle angafakwanga). Uya kudinga ishampu / isepha, ioyile yokupheka kunye namalahle okubhaka. Ungazisa 8 iindwendwe for $105, iindwendwe ezongezelelweyo $10 umntu ngamnye.
4.24 out of 5 stars from 46 reviews
4.24 · Izimvo eziyi-46
indawo ekhuselekileyo eneendawo zokutyela ezikufutshane.
Nceda uqhagamshelane nam ngokufowunela ku-whats app kwa-Airbnb.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Potrerillos de la Laguna